Ny Lafin’ny Firaisana Sovietika Maneho Fahitàna : Sarimiaina Dimy Hamotehana Ny Fanahinao · Global Voices teny Malagasy
MpanoratraChynara Bakyt kyzy
Voadika ny 02 Mey 2016 17:37 GMT
Ramanavy mampitahotra! Dikasary avy tamin'ny horonantsary amin'ny Tube an'ilay ‘Sokina anaty Zavona’, nakarin'ny mpampiasa Russian Animation.
Tratra ao anelanelan'ny fifandirana ara-jeografika sy politika manerantany ary ny milin'ny sivana etsy sy eroa, nisafidy ny hanamboatra ny làlany manokana hanaovana tsikera ny sasany amin'ireo mpanentana malaza tao amin'ny Firaisana Sovietika fahiny. Ary dia tena làlana tokoa moa izany!
Nanomboka nihitatra haingana ny sarimiaina Sovietika ny taona 1930 taorian'ny nametrahan'ny governemanta ny orinasa “Soyuzmultfilm” ho mpigeja samirery ny sampana mba hampiroborobo ilay indostria.
Fa tao aorian'ny Ady Lehibe Faharoa sy ny “Ady manohitra ny Disney” (bor’ba s disneevshinoi) vao nitodika ivoho ilay votoaty sy teknikan'ny Tandrefana kapitalista ireo mpanao kanto, ary tena nitsambikina marina tamin'ny lalina.
Tany amboalohany saika niombon-kevitra tanteraka tamin'ny fanentanana tao anatin'ny firaketan'i Dadatoa Walt ireo mpanao kanto Sovietika, mpanoratra tantara, ary mpandrindra, ary niompana tamin'ireo sarimiaina misy biby manana ny toetoetran'olona, toy ny fahafahana miteny.
Misy itovizany amin'ireo toa azy any amin'ny Tandrefana ireo mpiantsehatra ireo matetika.
Satria niantomboka ny Ady Mangatsiaka, nasiana fiovàna goavana io drafitra io na izany aza.
Ny taona 1960 sy ny taona 1980, nahitàna dingana feno famoronana manokana teo amin'ireo mpanao sarimiaina avy ao Firaisana Sovietika .
Toa sahala amin'ny mba hidifiana ny sivana Sovietika — izay vonona lalandava ny hanao ny kanto iray ho toy ny fotokevitra tsy misy dikany — sahy nikaroka lavitra kokoa tany amin'ny tsy hisian'ny fitsaratsaram-poana ireo mpanao kanto.
Ireto abany ireto ny sasany amin'ireo vokatra avy amin'izany dingana izany. Aza mijery aloha ry ankizy!
Goaika namboarina (Пластилиновая ворона), 1981.
Eto ilay mpitantara, toy ny mihira ny hira mifototra amin'ny poezia namboarin'i Ivan Krylov avy amin’ ‘Ilay Goaika sy ny Amboahaolo’ an'i Aesop, fa tsy afaka mahatadidy ny tonony.
Ny tena tian'ny tantara ampitaina tany amboalohany — “mampidi-doza ny mahatoky ny dokadoka ataon'ny hafa” — dia lasa novaina ary najotso ho torohevitra ho an'ny fiarovantena ny teboka sasany ao amin'ilay horonantsary. Miovaova ho hafa hatrany ireo mpisehatra isaky ny toejavatra misy.
Ny sasany amin'izy ireo toy ny hoe maherifo ao amin'ny poezia mahafinaritra “By Lukomor'ya” (У лукоморья) an'i Aleksandr Pushkin, raha ireo sasany kosa indray toy ny hoe eo fotsiny mba handray anjara amin'ny korontana ankapobeny.
Sokina ao anaty Zavona (Ёжик в тумане), 1975.
Nahazo fankasitrahana ambony indrindra tany amin'ny Firaisana Sovietika io sarimiaina malazan'i Yuri Norstein io, ary laza avy amin'ireo mpitsikera manerantany.
Niteny izy tenany mihitsy i Norstein hoe: “Tsy misy manaitaitra ao amin'ilay izy, tsy misy fientanentanana ao amin'ilay izy. Toa ohatra ny hoe fotoana iray nahafinaritra fotsiny ihany ilay Sokina anaty Zavona, izay ahitàna ireo zavatra rehetra mipetraka amin'ny toerany daholo.”
Toa sarotra sy tsy mety ny hiray hevitra na tsy hiray hevitra amin'izany fanambaràna iznay.
Eo Ambany Ranomandrin'ny Taona Lasa (Падал прошлогодний снег), 1983.
Sarimiaina miresaka lehilahy vendrana, kamo ary tenda-kanina, izay nandeha tany anaty ala mba hitady Hazon'ny Taombaovao, saingy teny an-dàlana dia latsaka tao anaty lavadranon'ny nofinofiny mikasika ny harena tsy misy farany (jereo ato ny tapany faharoa).
Tamin'ny fotoana nivoahany niaraka tamin'ilay hazo, efa lohataona sahady ary tsy maintsy namerina iny tany an'ala indray izy.
Nilaza ilay tale malaza, Alexander Tatarsky, fa nahatsapàny “zavatra nifanakaiky tamin'ny fahatapahan'ny lalandrà” iny sarimiaina iny, noho ireo fijeren'ny sivana.
“Nilaza izy ireo fa nanana fitondrantena tsy misy fanajàna ny vahoaka Rosiana aho. Nilaza izy ireo hoe: ‘Toetra iray ihany no anananao — lehilahy Rosiana — ary adala izy,'” hoy i Tatarsky nampahatsiahy.
Kanefa, nahazo laza be ilay izy.
Iza no Hilaza Angano? (Кто расскажет небылицу?), 1982.
Iray amin'ireo sarimiaina Armeniana malaza amin'ny sehony tsy azo ampiharina ilay ‘Iza no Hilaza Angano’. Miresaka mpanjaka leo tsy mahita atao ary nilaza tamin'ny mpanolontsainy ho tonga eo aminy miaraka amin'ireo hevitra vaovao mba hanala andro azy.
Namoaka fanambaràna fifaninanana ilay mpanolontsaina, izay ilazan'ireo olona angano amin'ny mpanjaka. Raha milaza ny mpanjaka fa “Tsy mino izany aho, tsy marina izany!” dia tokony homeny io olona io ny atsasaky ny fanjakàny.
Nefa raha milaza indray izy hoe mino ny tantarany, dia homena ny mpanjaka ny haren'ilay olontsotra.
Hafahafa sy mampatahotra ireo angano, raha toa ka mijanona mitovitovy amin'ny an'ireo olontsotra monina amin'ireo firenena Sovietika maro teo aloha foana ny toetoetran'ilay mpanjaka.
Oay! Trondro Miteny! (Ух ты говорящая рыба!), 1983.
Sanganasan'ny “Armenfilm” iray hafa ity farany, izay mety tsy tafavoaka tao raha nalefa tamin'ny Woodstock ny taona 1969.
Mitovitovy amin'ilay tantara malaza an'i Poushkin ‘Ilay Mpanjono sy ilay Trondro Volamena’ ilay tantara, ary manindrahindra ilay hafatra hoe miverina amin'izay niaviany foana ny hatsaram-panahy, na hoe voatohitohina kely na betsaka amin'ny toetranà mpiantsehatra manana vava roa, biby ratsy tarehy mifoka pipa, antsoina hoe Ekh. Ekh! aza ny mpitondra ny fientanentanana ao amin'ilay sary miaina.